Wasiir katirsan Xukuumadda Roble oo loo doortay Xildhibaan katirsan golaha Shacabka | Allbanaadir.com
Home NEWS Wasiir katirsan Xukuumadda Roble oo loo doortay Xildhibaan katirsan golaha Shacabka
Wasiir katirsan Xukuumadda Roble oo loo doortay Xildhibaan katirsan golaha Shacabka
Magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ee maamulka Koonfur Galbeed waxaa maanta ka socota doorashada shan kursi oo kamid noqonaya kuraasta golaha shacabka ee lagu soo dooranayo Koonfur Galbeed.
Kursigii ugu horeeyay oo doorashadii ka dhacday oo sumadiisu aheyd Hop184 waxaa ku tartamay Wasiirka Tamarta xukuumadda Soomaaliya Xasan Cabdinuur Cabdi iyo musharax kale oo lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Cali.
Kursigan oo natiijadiisa horey loo sii ogaa ayaa waxaa ku guuleestay wasiirka tamarka xukuumadda Soomaaliya Xasan Cabdinuur Cabdi oo helay 72-cod halka musharaxii la tartamayay Maxamed Cabdullaahi oo isna helay 27-cod.
Doorashada ka socota magaalada Baydhabo ayaa inta badan ah kuwa natiijadooda lasii ogyahay , waxaana inta badan kusoo baxaya musharaxiin si gaar ah loo wato oo lala doonayo kuraastan.
Previous articleFarmaajo oo lagu Eedeeyay in uu Sabab u ahaa in Baarlamaanka UK ka doodaan aqoonsiga Somaliland
Next articleWasiir katirsan Xukuumadda oo cabasho ka muujiyay Doorashada Kursiga Hop166